Mareykanka oo caawa weerar xagga cirka ah ka fuliyay duleedka Degmada Saakow ee Gobolka Jubbada Dhexe - iftineducation.com
Mareykanka oo caawa weerar xagga cirka ah ka fuliyay duleedka Degmada Saakow ee Gobolka Jubbada Dhexe
iftineducation.com – Wararka ka imaanaaya Gobolka Jubbada Dhexe, ayaa waxay sheegayaan in diyaaradaha Mareykanka ay caawa weerar qorsheysan ka fuliyeen duleedka Degmada Saakow ee Gobolka Jubbada Dhexe.
Diyaaradaha waxay beegsadeen Sarkaal ka tirsan Ururka Al Shabaab, kaasoo aan si rasmi ah loo aqoon midka uu yahay, laakiin waxaa la ogyahay in weerarka lala eegtay Sarkaal Sare oo Shabaabka ka tirsan.
Pentagon-ka Mareykanka, ayaa goor dhow sheegtay masuuliyadda weerarkaasi, ka dib markii ay sheegeen in ay la beegsadeen Sarkaal sare oo ka tirsan Ururka Al Shabaab.
Pentagon-ka oo qoraal kooban ka soo saaray weerarkaasi, ayaan qoraalka ku kala cadayn ninka uu yahay Sarkaalka la weeraray.
Dagaal-yahanada Al Shabaab oo gaaray goobta lagu weeraray ninkaasi, ayaa waxay isku gadaameen halkaasi, taasoo adkeysay in faah faahin laga helo Sarkaalka lala eegtay weerarka xagga cirka ah.
1-dii bishii September, ayay ahayd markii weerar xagga cirka ah oo laga fuliyay Gobolka Shabeellaha Hoose, uu Mareykanku ku dilay Amiirkii Al Shabaab Axmed Cabdi Aw Maxamed (Godane)
Ulula calanka farxiya fiska reer holand oo la aamusin waayay showgii fiska dartiis Daawo muuqaalka
Dowlada ingiriiska oo xadgub balaaran kula kacday qoys soomaali ah Daawo muuqaalka